Global Voices teny Malagasy » Miaraka amin’ny fihenan’ny velaran-tany mando, mizotra mankany amin’ny fihenana koa ny isan’ireo sakadia mpanjono tsy fahita firy ao Nepal · Global Voices teny Malagasy » Print
Miaraka amin'ny fihenan'ny velaran-tany mando, mizotra mankany amin'ny fihenana koa ny isan'ireo sakadia mpanjono tsy fahita firy ao Nepal
Voadika ny 16 Mey 2021 13:55 GMT 1	 · Mpanoratra Sanjib Chaudhary Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsimo, Nepal, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana
Sakadia mpanjono (Prionailurus viverrinus). Sary tao amin'ny Flickr an'i Dulup . CC BY-SA 2.0 
Ao amin'ny lemaka atsimon'i Nepal, izay olona saron-tahotra dia lazaina fa “Saka lena ianao”. Fa ao amin'izany faritra izany, misy sakadia tsy matahotra rano. Raha ny marina, dia monina eny akaikin'ireo tany mando izy io  ary amin'ny ankapobeny dia trondro no sakafony, nahazoany ny anarany ho sakadia mpanjono. Na izany aza, noho ny fahasimbàna sy fitataovan'ny faharavan'ny toeram-ponenany, mihena ny isan'ireo biby ireo ao Nepal.
Ankehitriny, ireo manampahaizana manokana dia maminavina  hoe eo amin'ny 150-200 eo ho eo no sakadia mpanjono misy ao Nepal, ary latsaky ny 2.500 no miaina malalaka  any an'ala, miparitaka amin'ny taha tsy mitovy eo anelanelan'i Azia Atsimo sy Azia Atsimo-Atsinanana, toerana nanisàna azy ireo tao Pakistàna, India, Nepal Bangladesh, Thailand, Myanmar, Kambodza, Sri Lanka ary Indonezia.
Tena kinga amin'ny fanjonoana trondro, tsotra kely ny tetika ampiasain'ilay sakadia: kapohany ny faritra ambonin'ny rano, ary rehefa voasarika amin'ny onja aterak'izany  ireo trondro, mitsoraka izy maka azy ireny. Ny tongony somary feno amin'ny ampahany, ny rambony miendrika toy ny familian-tsambo  ary ny volony tsy mitàna rano dia manampy azy rehefa milomano izy. Ankoatry ny fanjonoana, izay nahazoany ny anarany, mandrotika voalavo, bibilava, bibikely mampinono sy vorona ihany koa ilay sakadia.
It's #FishingCatFebruary  so let's learn a bit about the species! Fishing cats are expert hunters in aquatic habitats. Not only do they have some unique morphological features, they also have tricks up their sleeve! #fishingcats  #fishingcat  #fishingcatfebruary  #worldfishingcatday  pic.twitter.com/tEzcMsf951 
#FishingCatFebruary  io ka ndeha hianarantsika kely ny mikasika io karazany io! Manampahaizana manokana amin'ny fihazàna anaty rano ny sakadia mpanjono. Tsy hoe fotsiny manana toetena tokamiavaka ry zareo, fa koa manana fikafika any am-balahany any! #fishingcats  #fishingcat  #fishingcatfebruary  #worldfishingcatday  pic.twitter.com/tEzcMsf951 
— Fishing Cat Conservation Alliance (@fishingcatorg) 3 Febroary 2021 
Hitan'i Brian Houghton Hodgson voalohany tao Nepal tamin'ny 1836, io sakadia manana habe salantsalany io  izay milanja manodidina ny 5-16 kilao eo, dia mazàna no afangaron'ny olona amin'ny sakadia leoparda , ary sokajiana ho isan'ny Marefo ao anatin'ny Lisitra Mena an'ny IUCN .
“Amin'ireo karazan-tsakadia miisa 40  eto amin'izao tontolo izao, ny sakadia mpanjono tena marefo indrindra dia ilay karazany tokana mandany ny androm-piainany eny amin'ny faritra mando,” hoy i Rama Mishra, manomana PhD ao amin'ny Oniversiten'i Antwerp ao Belzika, ary nanangana ny Terai Fishing Cat Project, Nepal , tamin'ny Global Voices. “Tsy toy ireo saka hafa izay tsy tia mijoboka anaty rano, fa karazan-trondro sy biby maro anaty no fihinan'izy io. Araka izany, antsointsika hoe tondro iray milaza ny fahasalaman'ny firindram-piainana eny amin'ny faritra mando io sakadia io.”
Biolojistan'ny fiarovana i Sam Helle nibitsika hoe:
I love big cats, but I love small cats too! Follow my friend & colleague Rama Mishra as she collects Fishing Cat scats in southwest Nepal.@iRamaMishra  was the first publish a thesis on Fishing cats in Nepal & is the founder of the Terai Fishing Cat Project @fishingcatorg  pic.twitter.com/EkXkDklm8D 
Tiako ireo sakabe, fa tiako koa ireo saka kely! Zohio ny namako & mpiaramiasa Rama Mishra eo am-panangonana ny tain'ireo sakadia mpanjono ao atsimo-Atsinanan'i Nepal. @iRamaMishra  no voalohany namoaka fandalinana momba ireo sakadia mpanjono ao Nepal sady mpamorona ny Terai Fishing Cat Project @fishingcatorg  pic.twitter.com/EkXkDklm8D 
— Sam Helle 🐾🐅 (@samanthaiam) 26 Aprily 2021 
Momba ny fitondrantenan'ilay sakadia, nilaza i Mishra, izay mandalina ireo sakadia mpanjono ao amin'ny Koshi Tappu Wildlife Reserve and Chitwan National Park, fa “mpivoaka alina ireto sakadia ireo, ao anaty tontolo iray anjakan'ny olombelona ao amin'ilay faritra anebakebany ao amin'ny Koshi Tappu Wildlife Reserve,” saingy misy ihany koa ry zareo “hita mivoaka antoandro be nanahary any amin'ny toeram-ponenany somary anaty ala kokoa, toy ny ao anatin'ny fon'ny valanjavaboary ao amin'ny Koshi Tappu Wildlife Reserve and Chitwan National Park.”
Sarin'ny sakadia mpanjono, azon'ny kamerà fandrika. Sary an'ny Department of National Parks and Wildlife Conservation (DNPWC)/ National Trust for Nature Conservation (NTNC) avy amin'i Rama Mishra. Fampiasàna nahazoana alàlana
Maro ny sakadia mpanjono no tazana sy voaisa tany anatin'ireo faritra rehetra voaaro  ao Atsimo-Atsinanan'i Nepal, toy ny ao Koshi Tappu Wildlife Reserve , Parsa National Park, Chitwan National Park , Bardia National Park ary Shuklaphanta National Park avy any atsinanana mankany andrefana, ankoatra ny Banke National Park. Any ivelan'ireo faritra voaaro, hita koa ry zareo any amin'ireo faritra fiompiana trondro, toerana fambolena fary ary tanimbary .
Saingy ireo loza mitatao toy ny fahasimbàna sy ny fahaverezan'ny toerana fonenany dia niantraika tamin'ireo sakadia mpanjono ao Nepal. Raha niresaka tamin'ny Global Voices, Bhupendra Prasad Yadav , mpiandraiki-draharaha mpanampy ao amin'ny Departemanta Nepaley misahana ireo Valanjavaboary sy ny Fiainana an'ala, nilaza hoe “marobe amin'ireo faritra mando no efa mihamaina ary navadika ho tany fambolena ary fampiroboroboana ny fotodrafitrasa ao Nepal”. Nampiany fa, any amin'ny faritra sasany, ny fandotoana sy ny fanjonoana tafahoatra koa dia mandray anjara amin'ny fahasimban'ny faritra mando. “Any amin'ny toerana sasany, vonoina hakàna ny hodiny ireo sakadia mpanjono, na hakàna hena,” hoy izy.
Sakadia mpanjono monina amin'ny manodidina ny faritra mando. Sary an'i Rama Mishra. Fampiasàna nahazoana alàlana.
Nilaza koa i Yadav, izay niasa fatratra nanangona rakitra momba ireo sakadia mpanjono, sary nopihana tamin'ny alàlan'ny camera fandrika, nampiasaina ho amin'ny fanadihadiana iray tao amin'ny Shuklaphanta National Park  nanara-maso ireo tigra sy ny hazan'izy ireny, hoe:
Indrisy, rehefa simba ny toerana voajanahary nipetrahan-dry zareo na lasa tsy azony ampiasaina intsony, nampitombo ny asa fihazàna ataony amin'ny biby fiompy ireo sakadia. Araka izany, mba hiarovana ny bibiny dia vonoin'ireo mpiompy izy ireny. Na izany aza, ny fanimbàna ireo faritra mando aloha hatreto no loza mitatao goavana indrindra ho an'ireo biby.
Ankoatra izany, ny famadihana ireo tany fambolena ho honahona dia manampy trotraka ny fijalian'ireo sakadia. Na tsy mandratra azy ireny aza ireo mpiompy rehefa mivenjivenjy mitady haza any anatin'ny tany fambolena izy ireny, mihevitra ry zareo fa mba ho afaka mangalatra trondro dia miafina manodidina ny honahona ireo sakadia. Ho valifaty, fandrihan-dry zareo sy poizininy ireny sakadia ireny mba hijanonan'ny fakàny trondro. Misy sasany ihany koa matin'ny lozam-pifamoivoizana .
Fa etsy ankilany, nomarihan'i Mishra fa ireny sakadia ireny dia sakaiza tsaran'ireo mpiompy, satria mihaza voalavo, totozy sy vorona eny an-tany fambolena, izay manimba ny vokatra. Saingy mba hiarovana ireo naman'ny mpiompy ireo tsy ho lany tamingana, ny fiarovana sy famelomana ireo faritra mando no dingana voalohany sy maika indrindra, tsy resahana intsony ny fanentanana ireo vondrompiarahamonina mba hitahiry azy ireny. “Atsaharo ny fiheverana ho toy ny fambara loza rehefa mifanena amina saka eny amin'ny làlanao ianao,” hoy i Mishra. “Mazava be fa hametra ny isan'ireo sakadia eny amin'ny arabe izany.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/05/16/152561/
 BY-SA 2.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
 monina eny akaikin'ireo tany mando izy io: https://www.researchgate.net/publication/329970245_Conservation_Status_of_the_Fishing_Cat_in_Chitwan_National_Park_Nepal
 latsaky ny 2.500 no miaina malalaka: https://thejaguarandallies.com/2019/01/22/the-fishing-cat-a-cat-that-fishes/#FCQF-reference-9
 onja aterak'izany: https://www.earthisland.org/journal/index.php/articles/entry/fighting_for_the_fishing_cat/
 rambony miendrika toy ny familian-tsambo: https://www.theguardian.com/environment/2021/feb/17/the-fight-to-save-worlds-elusive-fishing-cats-india-aoe
 February 3, 2021: https://twitter.com/fishingcatorg/status/1356994965017006081?ref_src=twsrc%5Etfw
 sakadia leoparda: https://en.wikipedia.org/wiki/Leopard_cat
 Lisitra Mena an'ny IUCN: https://en.wikipedia.org/wiki/IUCN_Red_List
 karazan-tsakadia miisa 40: https://www.discoverwildlife.com/photo-galleries/cats-of-the-world/
 Terai Fishing Cat Project, Nepal: https://www.facebook.com/TeraiFishingCat
 April 26, 2021: https://twitter.com/samanthaiam/status/1386710108177108994?ref_src=twsrc%5Etfw
 voaisa tany anatin'ireo faritra rehetra voaaro: https://www.researchgate.net/publication/347635751_The_Fishing_Cat_Prionailurus_viverrinus_Bennett_1833_Mammalia_Carnivora_Felidae_in_Shuklaphanta_National_Park_Nepal
 Koshi Tappu Wildlife Reserve: https://en.wikipedia.org/wiki/Koshi_Tappu_Wildlife_Reserve
 Chitwan National Park: https://en.wikipedia.org/wiki/Chitwan_National_Park
 Bhupendra Prasad Yadav: http://www.researchgate.net/profile/Bhupendra_Yadav